Ukuvavanywa kwamaphepha okufika-Uyilo loyilo
NgoLwesine, Septemba 6, 2012 NgoLwesine, Septemba 6, 2012 Douglas Karr
Enye yezona zinto zidumileyo esizibonileyo zikhutshwe ngabaxhasi betekhnoloji,IFomstack , ebizwa Ukufika kweyona Midlalo.IFomstack kulula kakhulu ukuyisebenzisa umakhi weefom online ngesakhono sokwakha amaphepha okufika kwisisombululo esifanayo.
Iplani yokuHamba ngokuVavanya ngokuVulekileyo kwePhepha: Amaphepha okufika aqulathwe liqela lezinto ezichaziweyo. Iibhloko zokwakha eziboniswe apha ngezantsi zinokusetyenziswa njengesikhokelo xa uchaza kunye nokwenza iphepha elilelakho elifanelekileyo!
Abantu kwi-KISSmetrics balichitha iphepha lokufika kule infographic intle, bakunika ukonakala kweendawo ekufuneka uvavanye kuzo.
tags: vavanyoiphepha lokufikauyilo lwephepha lokufikaukuvavanywa kwephepha lokufikaukuvavanywa kwezinto ezininzi
Sep 6, 2012 ngo-12: 28 PM
Enkosi ngokwabelana nge-infographic enkulu! Ndiyathanda ukubona izithuba zikhupha izinto eziza kuvavanywa kwaye zenze kube lula kubathengisi ukuba benze ngcono.